UMengameli Zuma uzosidlulisa isinqumo nge-NPA | News24
UMengameli Zuma uzosidlulisa isinqumo nge-NPA
Pretoria – IHhovisi likaMengameli ngoLwesihlanu limemezele ukuthi lizosiphikisa isinqumo seNkantolo eNkulu yaseNorth Gauteng esithi kumele kukhishwe lowo ongumqondisi wokushushiswa komphakathi.
"Njengoba uMengameli esalinde umbiko ogcwele mayelana nalesi sinqumo, useyalelwe ukuba ukubuyekezwa kwaso okokuqala kuveza ukuthi kunezindlela eziningi ezivumela ukuthi asidlulise lesi sinqumo," kusho leli hhovisi esitatimendeni.
"INational Prosecuting Authority iyisikhungo esibalulekile kuMthethosisekelo wethu ohambisana nentando yeningi, ngakho ukuqokwa kwabazoyihola akuyona into ethathwa kuncane.
"Ngokuhlanganyela namajaji, nawo oqokwa nguMengameli, umqondisi wokushushiswa komphakathi udlala indima ebalulekile kwezobulungiswa kuleli.
OLUNYE UDABA: Inkantolo iyalele ukuba asishiye isikhundla sakhe oyinhloko ye-NPA
"Yingakho sithatha isinqumo sokudlulisa umyalelo wakamuva wenkantolo, futhi lokho sizokwenza ngokulandela imigudu efanele yezinkantolo."
Lokhu kulandela ukuthi inkantolo inqume ukuthi u-Advocate Shaun Abrahams, ongumqondisi wezokushushiswa komphakathi kuzwelonke, kumele asishiye isikhundla sakhe.